Qaarada Qaniga ah: Afrika waa Qaarada Aduunka ugu Qanisan Balse dadkeeda ka Indha iyo Dhega Xiran Yihiin(Qeybta 1 -aad-daawo ) | waamonews
Sunday, September 20th, 2015 | Posted by editor
Akhristayaasheena sharafta badan waxaan idiin soo gudbineynaa Barnaamijyo ku saabsan Kheyraadka Qaarada hodanka ah ee Afrika ilaaheey ku maneystay ee hadana dadkeeda ka Indha la’yahiin amaba ay qaxooti ka yihiin. Qormooyinkan aan kaga hadleyno Qaarada Afrika ayaa waxaan ku qaada dhigi doonaa guud ahaan Qaarada Afrika iyo mida gaarka ah ee dalkeena Hooya ee Soomaaliya.
Hadaan u guda galo qormadeeyda, markaan dib u eegay Qaaradeena hodanka ah ee Afrika ayaan waxaan jecleystay inaan la qeybsado Akhristayaasheena sharafta badan ee waamonews.com ku xiran, si ay iyaguna dib ugu jaleecaan nimcada Afrika ilaaheey ku galaday ee ay hadana ka indha xiran yihiin.
Su’aasha koowaad ee aan is weydiiyay ayaa aheyd Sawirka Khaldan ee Afrika laga bixiyo had iyo goor ee la oranayo waa Qaarada Faqriga iyo Gaajada amaba iyadoo la liidayo loo bixiyay dunida Sedaxaad. Hadaba Akhristoow ma is weeydiisay mase Ogtahay Afrika inay tahay Qaarada ugu Qanisan Aduunka?.
Hadaan kala qaado qeybaha ay u kala baxdo jawiga iyo Cimilada , Afrika waxay leedahay Hawa diiran sanadka oo idil, waxay ka koobantahay, Qeyb Cimiladeeda kulushahay oo dhirta ku yartahay Ugaadhana ay joogto, Qeyb dhirta iyo ugaadha ay aad ugu badan yihiin iyo Qeyb isku jir ah oo intaba kulmisa. Sidoo kale waxaay leedahay Bad iyo Wabiyo iyo waliba laga waaweyn(lake). Nimcada iyo Kheyraadka ay kumisay Qaarada Afrika malaha Qaarad la wadaagto Aduunka Intiisa kale.
Kheyraadka dabiiciga ah ee haatan kuba yar dunida inteeda kale ayay Afrika hodan ku tahay, Waxaan sanad walbo u soo dalxiis tagaa kumanaan kun oo dalxiisayaal .Hadaba inta aan u guda gelin Afrikaanka waxa ka qaldan ,bal aan gooni gooni u soo bandhigno waxa Afrika ay hodanka ku noqotay.
Qeybta 1-aad aan ku bilowno Ugaadha ama Duurjoogta Afrika hodanka ku tahay ee dunida inteeda kale haysanin ama dhif iyo naadirka ku yihiin. Africa waxay dunida kaga duwantahay berri dabiici ah oo Duurjoogtu ku badantahay isla markaasina ah meel noola kasta oo ilaahey Abuuray u baahan yahay inuu ku noolaado.
Duurjoogta Afrikca Caanka u tahay ee dunida looga soo dalxiistago Daawashadoodu.
Duurjoogta Afrika waa malaayiin balse intani waa inta ugu waaweyn dalxiisayaasha Xiiseeyaan, waana qeyb kamid ah Qaninimada Qaarada Afrika.
Qoraala taxana ah ayaan ku eegi doonaa qaaradeena Afrika iyo dalkeena hooyo ee Soomaaliya ee isagana nimcada ilaahey ku maneystay aan iska indha tireyno, Barnaamijyo xiiso badan ayaan idiin soo gudbin doonaa haduu alle Idmo.
3 Responses for “Qaarada Qaniga ah: Afrika waa Qaarada Aduunka ugu Qanisan Balse dadkeeda ka Indha iyo Dhega Xiran Yihiin(Qeybta 1 -aad-daawo )”
13/11/2015 at 9:52 am
13/11/2015 at 9:59 am
Ala,waaqanie,tolow yaquudan doona
20/11/2015 at 9:28 pm
waxa u arkaa afrika iney dadkeed soo jeedaan hadana hurdaan afrika ayaa isu soo jeeda
oo islaysa kana huruda kheyraadka iyo dalalka shisheeye